အကောင့်ကို ရီပို့စ်တွေဝိုင်းထုကြပြီး အဟက်ပါခံလိုက် ရတာမို့ IG ကနေ သူမကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အရူး လုပ်ရက်ကြတာကို အရမ်းခံစားနေရကြောင်း ရင်ဖွင့် လာတဲ့ စည်သူဝင်း ကောင်မလေးမြတ်နိုးအိမ် – XB Media & News
အကောင့်ကို ရီပို့စ်တွေဝိုင်းထုကြပြီး အဟက်ပါခံလိုက် ရတာမို့ IG ကနေ သူမကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အရူး လုပ်ရက်ကြတာကို အရမ်းခံစားနေရကြောင်း ရင်ဖွင့် လာတဲ့ စည်သူဝင်း ကောင်မလေးမြတ်နိုးအိမ်
November 29, 2021 Bestie_Author Cele News 0
အကောင့်ကို ရီပို့စ်တွေဝိုင်းထုကြပြီး အဟက်ပါခံလိုက်ရတာမို့ IG ကနေ သူမကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အရူးလုပ်ရက်ကြတာကို အရမ်းခံစားနေရကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ စည်သူဝင်း ကောင်မလေးမြတ်နိုးအိမ်…
ပရိသတ်ကြီးရေ စည်သူဝင်းနဲ့ ခြောက်နှစ်ကျော် လက်တွဲခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက် တွေကို တင်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ အကောင့်အဟက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတာကြောင့် အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မြတ်နိုးအိမ်ရဲ့ Instagram အကောင့်တွင် အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” မနက်ဖြန်ဆို ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ ပြောတော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို အရင်အမှားတွေအတွက် ပြင်ပြီး နောင်တရတယ်ဆို လက်ထပ်ကြတော့မ ယ်ဆို နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာတောင် အရမ်းချစ်ပြခဲ့ အရမ်းဂရုစိုက်ပြခဲ့တာတွေကဟန်ဆောင်ခဲ့တာတွေပဲလား။ အားလုံး မျက်စိစုံမှိတ် ပြီး ယုံမိခဲ့တဲ့ ငါ့အမှားလား
နင်ပဲ မင်းသားမို့ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းခဲ့တာလား? ငါ့ကိုလည်း တစ်ချိန်လုံး love you miss you ပြောတာတွေက တစ်ဖက်ကိုလဲ အဲ့ပုံစံအတိုင်းတဲ့လား။ ငါ့အတွက်ပဲ ထင်ခဲ့တာ ၆ နှစ်လုံး ရင်နာလိုက်တာ ငါ့ဘေးမှာလဲ ငါ့ကို အရမ်းချစ်ပြ ဟိုဘက်ကိုလဲ တစ်ချိန်လုံး ချစ်ပြ။ ငါက ချစ်တယ် လွမ်းတယ် တီတီတာတာတွေပြန်မပြောတတ်ခဲ့လို့လား
စကားတွေချိုသာစွာ မပြောတတ်ပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံး ရှိပေးခဲ့လဲဆိုတာ အသိဆုံးပါပဲ။ ဘဝမှာမိသားစုနဲ့ဝေးတစ်ယောက် တည်းမို့ အချစ်ငတ်ခဲ့တဲ့ ငါ့ကို လှည့်ဖျားရက်တယ်။ ရင်တွေကွဲလွန်းလို့ သေတော့မယ် ပိုဆိုးတာက တစ်ဖက်ကလဲ သိရက်နဲ့ နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး လိမ်ရက်တယ် အရူး လုပ်ရက်တယ်။ “ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေကာင့္ကို ရီပို႔စ္ေတြဝိုင္းထုၾကၿပီး အဟက္ပါခံလိုက္ရတာမို႔ IG ကေန သူမကို ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး အ႐ူးလုပ္ရက္ၾက တာကို အရမ္းခံစားေနရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာတဲ့ စည္သူဝင္း ေကာင္မေလးျမတ္ႏိုးအိမ္…
ပရိသတ္ႀကီးေရ စည္သူဝင္းနဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ လက္တြဲခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလးကေတာ့ လူမႈကြန္ယက္မွာ ေဖာက္ျ ပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြကို တင္ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာမွာပဲ အေကာင့္အဟက္ခံခဲ့ရပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမကို အျပစ္တင္ ေဝဖန္ေနတာေၾကာင့္ အေတာ္ေလးကို ပင္ပန္းေနတာ ျဖစ္ပါတ ယ္ ။ မၾကာေသးခင္က ျမတ္ႏိုးအိမ္ရဲ႕ Instagram အေကာင့္တြင္ အခုလို ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
” မနက္ျဖန္ဆို ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္မွာ ေျပာေတာ့ အရမ္းခ်စ္တယ္ဆို အရင္အမွားေတြအတြက္ ျပင္ၿပီး ေနာင္တရတယ္ဆို လက္ထပ္ၾကေတာ့မ ယ္ဆို ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိေနတာေတာင္ အရမ္းခ်စ္ျပခဲ့ အရမ္းဂ႐ုစိုက္ျပခဲ့တာေတြကဟန္ေ ဆာင္ခဲ့တာေတြပဲလား။ အားလုံး မ်က္စိစုံမွိတ္ ၿပီး ယုံမိခဲ့တဲ့ ငါ့အမွားလား
နင္ပဲ မင္းသားမို႔ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းခဲ့တာလား? ငါ့ကိုလည္း တစ္ခ်ိန္လုံး love you miss you ေျပာတာေတြက တစ္ဖ က္ကိုလဲ အဲ့ပုံစံအတိုင္းတဲ့လား။ ငါ့အတြက္ပဲ ထင္ခဲ့တာ ၆ ႏွစ္လုံး ရင္နာလိုက္တာ ငါ့ေဘးမွာလဲ ငါ့ကို အရမ္းခ်စ္ျပ ဟိုဘက္ကိုလဲ တစ္ခ်ိန္လုံး ခ်စ္ျပ။ ငါက ခ်စ္တယ္ လြမ္းတယ္ တီတီတာတာေတြျပန္မေျပာတတ္ခဲ့လို႔လား
စကားေတြခ်ိဳသာစြာ မေျပာတတ္ေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ထိအေကာင္းဆုံး ရွိေပးခဲ့လဲဆိုတာ အသိဆုံးပါပဲ။ ဘဝမွာမိ သားစုနဲ႔ေဝးတစ္ေယာက္ တည္းမို႔ အခ်စ္ငတ္ခဲ့တဲ့ ငါ့ကို လွည့္ဖ်ားရက္တယ္။ ရင္ေတြကြဲလြန္းလို႔ ေသေတာ့မယ္ ပိုဆိုးတာက တစ္ဖက္ကလဲ သိရက္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းၿပီး လိမ္ရက္တယ္ အ႐ူး လုပ္ရက္တယ္။ “ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Post Views: 309,756
မနက်ဖြန်(၃၀ နိုဝင်ဘာ)ရန်ကုန် ၅ မြို့နယ် မီးပျက် မည်